Gelatin agba agba
Gelatin ụlọ ọrụ
Collagen akpụkpọ anụ
Peptide Melon dị ilu
Ịnyịnya ibu Zoo Peptide
Oghere Capsule efu
Shell Capsule Akwukwo nri
Gelatin Capsule shei enweghị oghere
Ahụmịhe nke ndị nrụpụta
Kedu ụdị jelụ gluu / gluu na -agbaze agbaze nke YASIN INDUSTRY na -emepụta?
site na nchịkwa na 21-08-13
Dịka onye nrụpụta nke JELLY GLUE na HOT MELT GLUE na China, ndị otu ọkachamara R&D ọkachamara YASIN na -elekwasị anya mgbe niile na mmepe nke jelụ gluu / nrapado dị iche iche iji gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche maka ngwaahịa dị iche iche. Enwere ọtụtụ ụdị JELLY GLUE anyị nwere ...
site na nchịkwa na 21-07-29
Marine Fish Low Peptide bụ ngwaahịa mebere nke collagen azụ miri emi, ọ nwere uru pụrụ iche na nri na ngwa. Ọtụtụ n'ime ha bụ peptides ngwakọta agwakọtara nke nwere amino acid 26 nwere ịdị arọ molekul nke 500-1000 Dalton. Ọ nwere ike itinye uche ya ozugbo site na obere eriri afọ ...
N'ime ụlọ ọrụ ahụike ọgwụ, a na -eji gelatin mee shells nke capsules siri ike na nro, mbadamba, granulation, dochie anya ọgwụ, ihe mgbakwunye nri /ahụike, sirop na ihe ndị ọzọ. Ọ na -agbari ngwa ngwa ma na -eje ozi dị ka mkpuchi mkpuchi eke maka ọgwụ. Mepụta ...
Kedu ihe Gelatin bụ n'ezie
site na nchịkwa na 21-07-14
Dị ka ihe mejupụtara, gelatin yiri ka ọ zuru oke. A sị ka e kwuwe, a na-ahụ ya n'ọtụtụ nri kwa ụbọchị-site na ọka ụtụtụ na yogọt ruo marshmallows na bea gummy, na (n'ezie) ọgwụgwọ Jell-O fọrọ nke nta ka ọ bụrụ aha. Mana ịmara ebe nri gị si abịa abụghị naanị ịmara ...
Ụlọ ọrụ na -akwụsị mmepụta maka mmezi & nyocha igwe
Dị ka ụlọ ọrụ ọkachamara gelatin, Yasin Gelatin ararala onwe ya nye maka ị nweta ọkwa ọkwa gelatin dị elu na imepụta ọkwa gelatin maka ihe karịrị afọ 34. Kwa afọ, anyị na -etinye ego ụfọdụ na nkwalite ọrụ aka, nchekwa gburugburu ebe obibi na ike mmepụta enha ...
YASIN-Ọkachamara Onye nrụpụta Gelatin
site na nchịkwa na 21-06-29
Anyị bụ ndị ọkachamara na -eri nri/na -emepụta gelatin ihe karịrị afọ 35 na China. Obi dị anyị ụtọ ịgwa gị na anyị na ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ na Eshia na America na -arụkọ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ bụrụ na ị nweta isi ọwụwa maka ịdị mma gelatin. N'ebe a, anyị ga -achọ ịkọrọ gị ...
Yasin Gelatin sonyere na API Guangzhou 2021
site na nchịkwa na 21-06-18
API China bụ ụlọ ọrụ ọgwụ na kemịkal zuru oke nke egosipụtara na ụlọ ọrụ ọgwụ China. Site na ahụmịhe karịrị afọ 40 na China, ọ bụ ememme ama ama maka ndị niile sonyere n'ahịa ahịa ọgwụ China. API China na ihe omume 3 metụtara ya ...
Onye na -elekwasị anya na ngwaahịa collagen
site na nchịkwa na 21-05-17
Ekele kacha mma sitere na Yasin. Taa anyị ga -achọ ịkọrọ gị otu onye isi anyị mr. Ling, akụkọ gbasara onwe ya na -akpali anyị ma mee ka anyị na ya na -arụkọ ọrụ mgbe niile. Ọ na -ebili n'isi ụtụtụ ma na -arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị, nke na -ewe naanị otu afọ ka ọ bụrụ osote onye ntụzi nyocha nke ndị nkịtị ...
Ike iji kwado ndị ahịa anyị
site na nchịkwa na 21-05-06
Daalụ nke ukwuu maka ntụkwasị obi gị na nkwado anyị. Anyị ga -edobe ike anyị iji kwado ndị ahịa anyị ịzụlite ọtụtụ azụmaahịa n'ahịa ha site na nzọụkwụ. Na ebe a, anyị ga -achọ ịkọrọ gị ihe anyị nwere ike imere gị, dị ka ndị a: 1. Nkwado nyocha ụlọ ọrụ: Yasin, ọ bụghị naanị na anyị nyere anyị ...
Onye nrụpụta 3 kacha elu na China nke EPSTY CAPULE
site na nchịkwa na 21-04-26
YASIN GELATIN bụ onye nrụpụta 3 kacha elu na china nke EMPTY CAPSULE. Anyị na -arụkọ ọrụ na ọtụtụ ama ụdị ọgwụ ama ama n'okwu niile. Ọtụtụ ndị ahịa na -enwe afọ ojuju maka oke mma anyị. Ngwaahịa anyị na -aga nke ọma bụ capsule gelatin na (veg) HMPC capsule efu. Anyị nwere abili siri ike ...
YASIN GELATIN - Onye nrụpụta ọkachamara nke Paintball Gelatin si China
Paintball bụ egwuregwu ama ama n'ụwa niile. Paintball bụ mgbo eji agba egbe paintball. Gelatin bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi n'oge a na -emepụta bọọlụ. Usoro onunu ogwu nke gelatin bu 40%-45%. Gelatin etinyere na paintball bụ ka ọ belata ike nke mmetụta ahụ. Gelatin bụ maka ...
Nkwa oge nnyefe kwụsiri ike
site na nchịkwa na 21-04-14
Anyị bụ ndị ọkachamara na -eri nri/na -emepụta gelatin ihe karịrị afọ 35 na China. Ọ bụrụ na ị nwere okwu ọ bụla gbasara oge nnyefe na -ejighị n'aka, biko hụ n'okpuru ozi anyị maka gị. Ikike ọkọnọ siri ike-Ị nwere ike nweta ngwongwo gị n'oge ọbụlagodi n'oge kacha elu. Mmepụta kwa ụbọchị ruru 8mt ...
Copyright - 2019-2020: Ikike Niile Echekwabara.